ယုံကြည်စိတ်ချရသော ၊ သင့်တင့်မျှတသော ၊အကျိုးပြုနိုင်သော စွမ်းအင်နှင့်ကွန်ယက်
လူပေါင်း၈၀၀၀ခန့်နေထိုင်သောရွာကြီး၉ရွာကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေသောNimasi Community Health Center ရှိဆရာဝန်များသည်လျှပ်စ်စစ်မီးပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် မီးအမှောင်ကျခြင်းကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်သုံးဖြေရှင်းနည်းလမ်းကယာယီအတွက်သာသုံးနိုင်ပြီးအခြားသောအကျိုးပြုနည်းလမ်း ဖြစ်သောsolar panels များမလုံလောက်ခြင်း၊ ဓါတ်ဆီလောင်စာဆီသုံးမီးစက်များအတွက် ကုန်ကျစရိတ်များပြားပြီး အသံဆူညံမှုနှင့်အတူ လေထုညစ်ညမ်းမှုများဖြစ်စေသောကြောင့်ရေရှည်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
Nimasi ကျန်းမာရေးဆေးခန်းတွင်BIMA ကိုတပ်ဆင်ရန် Bosch teamမှ တနေ့ထဲပြီးအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ ဒီစနစ်ကိုတပ်ဆင်ပြီးနောက် ကျန်းမာရေးစင်တာတွင်မီးအမှောင်ကျမှုလုံးဝမရှိတော့ပဲ Solar panels မှရရှိသော စွမ်းအင်များမှာ လိုအပ်သည်ထက်ပိုလျှံလာပြီးထိုပိုလျှံမှုများကို ကွန်ယက်တွင်ပြန်လည်သုံးနိုင်ခဲ့သည် ။ လောင်စာဆီသုံးမီးစက်များကိုလဲအသုံးပြုချိန်လျော့နည်းလာခဲ့သည်။ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းအနေဖြင့် လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက်မှုလုံးဝမရှိတောပဲ လောင်စာဆီသုံးစွဲမှုလည်းလျော့နည်းလာကာကုန်ကျစရိတ်သက်သာမှုနှင့်အတူ လေထုညစ်ညမ်းမှုများလျော့နည်းစေခဲ့သည်။
BIMA အကြောင်းအသေးစိတ်သိလိုပါသလား? သင့်ရဲ့လုပ်ငန်းအတွက်Bosch မှကူညီနိုင်ပါသလား ? ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
BIMA-ဆန်းသစ်သောနည်းပညာ , အာရှနိုင်ငံများအတွက် အရှေ့တောင်အာရှမှတီထွင်သည်။
2017တွင် စတင်ခဲ့ပြီး BIMA သည် လိုအပ်ချက်နှင့်အည်ီဆောင်ရွက်ထားသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး intelligent microgrid controller , အထူးစီမံပေးထားသော ဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း ၊ analytics နှင့် services package တို့ပါဝင်ပါသည်။ BIMA သည် စွမ်းအင်မျိုးစုံနှင့်ပေါင်းစပ်ပီး staorage နှင့် လျှပ်စ်ဓါတ်အားကို ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်မြင့်တင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ထိုနည်းလမ်းဖြင့် လျှပ်စစ်အားပြတ်တောက်မှုကိုကာကွယ်ပေးပြီး ဆိုလာစွမ်းအင်ကို သင့်တင့်စွာအသုံးပြုစေခြင်းတို့ကြောင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကိုကာကွယ်ပေးရုံမကလောင်စာဆီသုံးမီးစက်အသုံးပြုမှုကိုနည်ပါးစေပြီး လောင်စာဆီအတွက် ကုန်ကျစရိတ်ကိုသက်သာစေပါတယ်။
BIMA သည် Bosch ၏ ဆန်းသစ်သော နည်းပညာ ဖြင့် ပြောင်းလဲမှုများကို ဖန်တီးပေးနိုင်သောပြယုဂ်တခုဖြစ်သည်။ ဒီ လုပ်ဆောင်မှုမှာ cutting-edge solution (Leading and innovative IT solution ) ဖြစ်ပြီး အာရှတွင် အားလုံးကိုဖန်တီးလုပ်ဆောင်ကာ ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းနှင့် လုပ်ငန်းများအတွက် အရေးပါသောလိုအပ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ ပုံမှန်ရရှိနေသောလျှပ်စစ်ကွန်ယက်သည် ဓါတ်အားလျော့နည်းလာပြီး အာရှနိုင်ငံများတွင် လိုအပ်သော လျှပ်စစ်ဓါတ်အားပမာဏကို လုံလောက်စွာမပေးစွမ်းနိုင်ပေ။ BIMA ကဲ့သို့ နည်းပညာမြင့်ဖြေရှင်းနည်းလမ်းများဖြင် လုံလောက်သောလျှပ်စစ်ဓါတ်အား ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှု များကို ကုန်ထုတ်လုပ်မှု ၊ telecommunications ၊ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း နှင့်အခြားသော စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါသည်။
ပျမ်းမျှလျှပ်စစ်သုံးစွဲသူမှာ ၄.၁၇ နာရီအတွင်း 2017.ဖြစ်သည်။
BIMA နှင့်အတူ လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက်လိုအပ်သော ဆေးကုသမှုဆိုင်ရာကိရိယာများသာမက ပြည့်စုံသောဝန်ဆောင်မှုများကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ လူနာများအတွက် ကုသမှုပိုင်းတွင် ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Nimasi Clinic ၏ဦးဆောင်သူ
BIMA က Nimasi Clinic အတွက်လိုအပ်နေတဲ့ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကိုဘယ်လိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ခဲ့လဲ လေ့လာကြည့်ပါ။
လူပေါင်း၈၀၀၀ခန့်နေထိုင်သောရွာကြီး၉ရွာကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးနေသောNimasi Community Health Center ရှိဆရာဝန်များသည်လျှပ်စ်စစ်မီးပြတ်တောက်ခြင်းနှင့် မီးအမှောင်ကျခြင်းကိုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။